साहुले जग्गा हडपेपछि ओडारमा बास :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
साहुले जग्गा हडपेपछि ओडारमा बास
८ पुस, धादिङ । वरपर अनकन्टार जंगल । छेउवैमा कहालीलाग्दो भीर । भरुको फेदमा ठूलो ढुंगाको कोप्चेरोभित्र साँघुरो ओडार । हो, त्यही ओडारले सुमनसिंह चेपाङको परिवारलाई आश्रय दिँदै आएको छ ।
सुमनको सात बर्ष अघिसम्म गाउँमा एउटा घर र तीन रोपनी पाखोबारी थियो । घरव्यवहार चलाउन छिमेकीसँग लिएको ऋणले साँवाव्याज गरेर ३० हजार रुपैयाँ नाघेपछि साहुले घर र पाखोबारी हडपेका कारण सुमनको परिवार दमारमा रहेको जंगलस्थित ओडारमा जान बाध्य भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट तथा विभिन्न दैनिक पत्रिकाले खबर छापेका छन् ।
साहुको ऋण तिर्न नसकेर जेथा गुमेपछि विरत्तिएर जंगल छिरेका सुमन र पत्नी चन्द्रकुमारीले जीवन निर्वाहका लागि दाउरा बेच्ने पेसा अँगाल्दै आएका छन् । उनीहरुले दुई दिन लगाएर दाउरा भेला पारी बेच्न मौवाखोलास्थित सडकमा पुग्छन् । ‘दाउरा बेचेर आएको पैसाले साँझ विहान खानेकुराको जोहो गर्छु,’ सुमनले भने ‘दाउरा बेच्न जान नसक्दा धेरै दिन वनमा भेटिने जंगली साग र कन्दमुलले भोक टार्छौ ।’
सुमन र चन्द्रकलाका साथमा तीन छोरी र एक छोरा छन् । १५ बर्ष नाघेका दुई छोरीले भने भर्खरै आफुखुसी विहे गरेका छन् । उनका परिवारका सदस्यहरुमा न एकसरो बाक्लो कपडा छ न ओढ्ने ओछेयाउने । खाना पकाउने एउटा पुरानो कालो कसौंडी र खाना खानका लागि चारवटा स्टिलका थाल छन् ।
साथमा रहेका १३ वर्षकी ठूली कान्छी छोरी, १२ बर्षकी काँइली, तीन बर्षकी पविता र ६ बर्षको छोराले विद्यालय देखेका छैनन् ।
2 Comments on “साहुले जग्गा हडपेपछि ओडारमा बास”
नरेन्द्र सेर्मा wrote on 23 December, 2012, 2:10
सरकारले तत्काल पुनर्बासको ब्यवश्था गर्नु पर्छ ।
Hari Paudel wrote on 23 December, 2012, 11:49
जनता को दुख – पिडा सुन्दै हिड्ने प्र. म. जी को ध्यान यता तिर गयर तिनीहरुको उद्दार गरेदेखि बल्ल यो सरकार गरिब जनता को सरकार हुने थियो कि जस्तो मलाई लागो है !!!!!!!